Laascaanood: Madaxii Garsoorka Sool oo la dilay & aragtida Masuuliyiinta Gobolka | Xarshinonline News
Laascaanood,(Nnn)- Guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka gobolka Sool marxuum Saleebaan Jaamac Ciise, ayaa xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Sida uu Wargeyska Ogaal u sheegay Taliyaha Booliska qaybta gobolka Sool Mr. Maxamed Saleebaan Gooni, marxuumka waxa toogasho ku dilay dablay aan la aqoonsan, xilli uu abaaro 7:30 fiidnimo ku sugnaa meel aan ka fogayn gurigiisa oo ku yaala badhtamaha magaalada Laascaanood. “Weli waxba lama sheegi karo oo aad waxba looma oga, laakiin waxaan idiin xaqiijin karaa inuu dhintay guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka gobolka Sool,” ayuu yidhi Taliyaha qaybta Booliska Sool.
Mar la waydiiyay waxa ay Boolis ahaan ilaa hadda ka ogyihiin cida dilkaas fulisay, waxa uu ku jawaabay, “Adeer, weli lama gaadhin, waana hawl socota.”
Waxa uu sheegay in aanay jirin cid ay weli u qabteen dilkaas lagu fuliyay guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka oo hayay dhawrka xil ee ugu sareeya Garsoorka gobolka Sool oo dilal qorshaysan oo dhawr ahi muddooyinkan ka dhacayeen. “Weli baadhitaankii baanu ku jiraa oo magaalada ayaanu maraynaa, magaaladuna way xidhan tahay oo wax gaadiid ahi kama baxayaan, wax kaantarool ahna lagama baxayo, magaalada dhexdeedana wax baabuur ahi kama baxayo oo amarka noocaas ah baanu bixinay,” ayuu raaciyay.
Mr. Gooni waxa uu sheegay in Xeer-ilaaliyahaa geeriyooday lagu toogtay gurigiisa hortiisa, xilli uu doonayay inuu hoydo.
← KULMIYE oo ka hadlay wakhtiga M/weynaha cusub soo magacaabayo Xukuumaddiisa
Rayslawasaaraha Itoobiya oo ku baaqay in la cidhib-tiro kooxda Alshabaab →